Profil amin'ny orinasa - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
Mika (Tianjin) Pipeline Technology Co., Ltd dia hita ao amin'ny tian-tanna-iray amin'ireo vondrom-piarahamonina efatra mivantana eo ambany fitondran'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, Tianjin no fulrum stratejika amin'ny làlana marika maritimika, ny làlan-kizan'ny iray fehin-kibo sy ny lalana iray . Ny governemanta dia nametraka toerana fitateram-pitaterana iraisana iraisam-pirenena.
Manome vokatra vita amin'ny fantsona azo antoka sy avo lenta isika ， hiantoka ny tombo-kase tsy leakage ， faritra apetraka dia:: otomotis, miaramila, rafitra intake amin'ny rivotra, rafitra fandefasana motera, fanamafisana sy fametrahana ny rafitry ny tatatra, rafi-panondrahana.Izahay dia manana varotra kilasy voalohany, famolavolana, famokarana, ekipa aftersale ， Ny orinasa anay dia manana mpiasa 100 eo ho eo, ao amin'izy ireo, misy ny 15 mialoha sy aorian'ny varotra, teknisianina 8 (anisan'izany ny injeniera zokiolona 5), ​​manana masoandro milentika, pragmatic, ambony kolontsaina orinasa.
Manolotra serivisy matihanina tokana koa izahay. Avy amin'ny fonosana ka hatramin'ny famatsiana, dia samy manaraka ny fandidiana mahazatra sy ny fampahafantarana teknika.
Ny mpanorina Mr. Zhang Di, manana traikefa efa ho 15 taona izao, tsy mitsahatra mankamin'ny fototry ny teknolojia fifandraisana ary fahatsiarovan-tena maoderina. Steady dia nanitatra ny orinasa, lanjan'ny vokatra. Ny fahombiazan'ny nanaovana ny sokajy vokatra dia nitombo hatrany. Noho ny hery ara-teknika matanjaka, ny fizotran'ny famokarana tonga lafatra ary ny famolavolana voajanahary mba hamoronana ny vidiny lafo be, ny fitaovana fitsapana tonga lafatra, ny fanaraha-maso hentitra ny kalitaon'ny dingana dia nahatsapa ny fenitra fitantanana ny kalitaon'ny vokatra, ny fomba, ny systematization, miantoka ny fahamarinan-toerana sy ny fahatokisana. ny kalitaon'ny vokatra.
Tena faly be ianao tonga eto ary hitsidika ny zavamaniry ao anaty tranokala.